Nike Training Club - Workouts & Fitness Guidance 6.4.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.4.0 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
Application မ်ား က်န္းမာေရး & ႀကံ႕ခိုင္ေရး Nike Training Club - Workouts & Fitness Guidance
Nike Training Club - Workouts & Fitness Guidance ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Nike ကသင်တန်းကလပ်သင့်ရဲ့ Ultimate ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသင်တန်းပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ မိုဘိုင်းနှင့်ယောဂရန်ခွန်အားနှင့်ခံနိုင်ရည်ကနေအခမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့မထိုက်မတန် Get - featuring ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ Nike ကမာစတာလူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်း & လေ့ကျင့်ခန်းပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းအချိန်မရွေး, ဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်, app ထဲမှာအားလုံးသင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှု Track ။ bodyweight လေ့ကျင့်ခန်းကနေ Full-ပစ္စည်းကိရိယာများလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ပဲသင်တို့အဘို့, ကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်ခန်းအကြံပြုချက်များတွေ့ရှ။
အဆိုပါ Nike ကသင်တန်းကလပ်လေ့ကျင့်ခန်းစာကြည့်တိုက်များပါဝင်သည်:
•ခန္ဓာကိုယ်-တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသင့်ရဲ့ ABS ပစ်မှတ်ထားလေ့ကျင့်ခန်း, လက်နက်, ပခုံး, glutes နှင့်ခြေထောက်အာရုံစူးစိုက်
•အစွမ်းသတ္တိ, သည်းခံခြင်း, ယောဂနှင့်ရွေ့လျားလေ့ကျင့်ခန်း
•လက်သင်, အလယ်အလတ်နှင့်အဆင့်မြင့် Levels
• Bodyweight သာ, အလင်းနှင့်အပြည့်အဝကိရိယာ
•အချိန်-based နှင့်ကိုယ်စားလှယ်-based options များ
လေ့ကျင့်ခန်းစုစည်းမှုများအကြံပြုလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Nike ကလူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းနှင့်ကျဟရှောယသောမတ်စ်, ဂျူလီ Ertz ဆစ်ဒနီ Leroux Dwyer နှင့်စီရော်နယ်ဒိုတို့အပါအဝင်သင်အကြိုက်ဆုံးအားကစားသမားများ, အချို့ထံမှလမ်းညွှန်မှုအစုတခုကိုဆက်ကပ်။ သင့်ရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အပေါ်အာရုံစိုက်နေဖို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားကစားသမားများနှင့်သင်တန်းဆရာကနေအကြံပေးချက်များနှင့်လမ်းညွှန်မှုအရနှင့်တူသောလေ့ကျင့်ခန်းစုစည်းမှုများနှင့်သင်၏ကြံ့ခိုင်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိ:
• Leaner အား ABS Get
• 6-အပတ်လမ်းညွှန်ပိန်နှင့်ထို့ထက် ပို. Get မှ
Nike ကသင်တန်းကလပ်အဖွဲ့ဝင်များကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတို, bodyweight သာသူတို့ဘဝလမျး၌ရရှိသွားတဲ့လျှင်ပင်ချင်သောရလာဒ်များရရှိရန် workouts ကိုချစ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ် "သင်သည်ရွေးချယ်မှုများ" သင်၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အပေါ်အထူးအခြေခံထားတယ်။ ပိုငျသညျ Nike ကသင်တန်းကလပ်နှင့်အတူလေ့ကျင့်, ပိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင့်ရဲ့အကြံပြုချက်များဖြစ်လာသည်။
Enter နှင့်မှတ်တမ်းတင်သည်အခြားလုပ်ငန်းများနှင့်သင်ပြုတင်ပြသော, ဘတ်စကက်ဘော, ဗိုင်းငင်, စတူဒီယိုအတန်းနှင့်များစွာသောပိုပြီးကဲ့သို့အားလုံးဒီတော့သင့်ရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးဘဝခြေရာခံစောင့်ရှောက်နိုင်ပါတယ်။
နှင့်မမေ့မလြော့ပါ - Nike ကသင်တန်းကလပ်ကိုလည်း Google ကြံ့ခိုင်မှုနှင့်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းထပ်တူပြုပြီး။
သင့်ကို run ခြေရာခံခြင်း
Nike က Run ကိုကလပ်နှင့်အတူ Run အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, သင့်ရဲ့ပြေးအလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုသမိုင်းတှငျမှတျတမျးတငျထားသပါလိမ့်မည်။
Nike သင်တန်း Club Premium
သင့်ရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိဖို့ပဲပိုမိုလွယ်ကူတယ်။ ကျနော်တို့ဖြောင့်သည်သင်, ၎င်းတို့၏ရလဒ်များကို-အာရုံစူးစိုက်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အစီအစဉ်များကိုကယ်နှုတ် Nike ကမာစတာလူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းကြီးမှူးမတ်ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူပူးပေါင်းပါတယ်။ ယခု Subscribe နှင့် Access တစ်ဦး 7-နေ့ကအခမဲ့အစမ်းရ:
Nike ကမာစတာလူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းကဦးဆောင်ပြီး• 4-6 အပတ် Programs ကို
•အတွေးအခေါ်တွေ, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်အိပ်စက်ခြင်းအပါအဝင်ကျွမ်းကျင်သူအာဟာရ & ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်မှု
•အားကစားရုံ-စတိုင်သင်တန်းများအတွက် On-Demand Classes ရဲ့နဲ့ Whiteboard ယလေ့ကျင့်ခန်းအပါအဝင်နယူးလေ့ကျင့်ခန်း Formats
(မဆိုအခမဲ့စမ်းသပ်မှုတွေပြီးနောက်) တစ်ခု NTC ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်တစ်လလျှင် $ 14.99 (နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်း $ 119,99 ဖြစ်ပါတယ်) ဖြစ်ပါသည်။ ငွေပေးချေမှုသည်သင်၏ Google Play စအကောင့်တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။ သင့်စာရင်းပေးသွင်းထား (ရွေးချယ်မည့်အစီအစဉ်ပေါ် မူတည်. ) လစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးမည်နှင့်သင့် Google အကောင့် Play မတိုင်မီလက်ရှိစာရင်းသွင်းခြင်းကာလ၏အဆုံးမှ 24 နာရီအတွင်းတစ်ဦးချင်းစီသက်တမ်းတိုးဘို့တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။ Google က Subscription Center က Play သို့သွားသည့်အချိန်တွင်မဆို Cancel ။ Auto-သက်တမ်းတိုးဖို့စွဲချက်ကိုရှောင်ရှားရန်, အခမဲ့အစမ်း (ရှိပါက) သို့မဟုတ်လက်ရှိစာရင်းသွင်းခြင်းကာလ၏အဆုံးမတိုင်မီအနည်းဆုံး 24 နာရီ cancel ။ NTC ပရီမီယံ၌စာရင်းပေးသွင်းခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ငါတို့သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီများနှင့်သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသဘောတူသည်။
NTC ပရီမီယံမှ subscriptions ကိုအပေါ်ပြန်အမ်းကို Google Play စတိုးမူဝါဒဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ NTC ပရီမီယံမှ subscriptions ကို non-အမ်းဖြစ်ကြပြီးပြန်အမ်းသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်အခွင့်မရှိသောလည်းမရှိသက်ဆိုင်သောပညတ်တရားအားဖြင့်လိုအပ်သောမဟုတ်လျှင်သို့မဟုတ်အဖြစ်မဟုတ်ရင် Store ကမူဝါဒက Play ကို Google ကခွင့်ပြုသော။
တန်ခိုးအာနုဘော်လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသည်။ ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူရထား လာ. ယနေ့ Nike ကသင်တန်းကလပ် download လုပ်ပါ။
Nike Training Club - Workouts & Fitness Guidance အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Nike Training Club - Workouts & Fitness Guidance အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Nike Training Club - Workouts & Fitness Guidance အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Nike Training Club - Workouts & Fitness Guidance အား အခ်က္ျပပါ
onlystore စတိုး 268 105.89k
Nike Training Club - Workouts & Fitness Guidance ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Nike Training Club - Workouts & Fitness Guidance အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ KicksOnFire.com LLC
Release date: 2019-09-13 03:17:25
Nike Training Club - Workouts & Fitness Guidance APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ